Ururada Bulshada rayidka oo ka hadlay hanaanka doorashada 2016-ka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ururada Bulshada rayidka oo ka hadlay hanaanka doorashada 2016-ka “SAWIRRO”
Ururada Bulshada rayidka ah oo maanta Muqdisho ku yeeshay shir wadatashi ah oo ku saabsan qaabka ay noqoneyso doorashada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka 2016 ayaa kulankooda warbixinno ka dhageystay shan xubnood oo bulshada rayidka ah u matalayay Madasha Wadatashiga Qaraan ee doorashada Soomaaliya.
Ka qeybgalayaasha kulanka ayaa si aad ah uga dooday afar qodob oo Madasha wadatashiga horyaalla, kuwaasi oo kala ah in hanaanka doorashada Soomaaliya uu noqdo hab heer Qaran oo xisbiyo ku dhisan, Hab Mamaul Goboleed, hab Doorasho Degmooyin, iyadoo la fiirinayo degmooyinkii jiray 1991-kii kahor iyo Hab beeleed.
Zahro Cumar Maalin oo madax u ah ergada Bulshada rayidka ee kujira Madasha Wadatashiga Qaran ee Doorashada Soomaaliya ka dheceysa ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegtay in Talooyinka kasoo baxay kulankii maanta ay u gudbin doonaan Madasha si loo ogaado Aragtida bulshada.
Duniyo Maxamed Carshaan oo kamid ah Madaxda Hay’adda IIDA, isla markaana kulankii maanta ka qeybgashay ayaa waxa ay ku talisay in la joogteeyo kulamada nuucan ah ee bulshada ay uga hadlayaan aragtidooda ku aadan geedi socodka Siyaasadda.
Mubashir Maxamed Axmed oo ku hadlay magaca Dhallinyardii ka qeybgalay kulanka Wadatashiga ah ee looga hadlayay nuuca ay noqon karto Doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016 ayaa wax lagu farxo ku tilmamaay in dhallinyarada markii ugu horeysya laga qeybgaliyay Wadatashiyada Siyaasadda dalka .
Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka oo ka soo laabtay Turkiga “SAWIRRO”
Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka oo ka soo laabtay Turkiga "SAWIRRO"